Mpanonta: Mila Ho faty ny Paywalls. Misy fomba tsara kokoa hahazoana vola | Martech Zone
Lasa mahazatra amin'ny famoahana nomerika ny Paywalls, saingy tsy mahomby izy ireo ary miteraka sakana amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Fa kosa, ny mpamoaka lahatsoratra dia tsy maintsy mampiasa dokam-barotra mba hahazoana vola amin'ny fantsona vaovao ary hanome maimaim-poana ny atiny iriny ho an'ny mpanjifa.
Tany amin'ny taona 90, rehefa nanomboka nanetsika ny votoatiny an-tserasera ny mpamoaka lahatsoratra, dia nisy tetika maromaro nipoitra: ny lohateny lehibe ho an'ny sasany ihany, ny fanontana manontolo ho an'ny hafa. Rehefa nanangana tranonkala izy ireo, dia nisy karazana vaovao tanteraka amin'ny famoahana nomerika tokana na nomerika voalohany, izay nanery ny rehetra hiditra ao amin'ny nomerika mba hifaninana. Ankehitriny, na dia ho an'ireo matanjaka amin'ny indostria aza, ny fanontana printy dia efa saika tsy misy dikany amin'ny fisiany nomerika feno.
Saingy na dia nivoatra aza ny famoahana dizitaly tao anatin'ny 30 taona farany, zavatra iray no mbola fanamby mahasosotra — ny vola. Nanandrana fomba isan-karazany ny mpamoaka, saingy voaporofo hatrany fa tsy mandaitra eran-tany ny iray: paywalls.
Amin'izao fotoana izao, ireo mpamoaka lahatsoratra izay miziriziry amin'ny fandoavana votoaty dia diso hevitra tanteraka ny fiovan'ny fanjifana media manerana izao tontolo izao. Ankehitriny, miaraka amin'ny safidy maro, anisan'izany ny fandefasana horonan-tsary izay hitan'ny sasany fa mahasarika kokoa, niova ny maodely media manontolo. Ny ankamaroan'ny olona dia mahazo ny fampahalalam-baovaony avy amin'ny loharano maro samihafa, saingy iray na roa ihany no aloany. Ary raha tsy eo an-tampon'ny lisitra ianao dia tsy mahazo karama. Tsy resaka hoe mendrika na mahaliana na mifanentana ny votoatinao. Ampahany olana amin'ny kitapom-bola izany. Tsy ampy ny mandehandeha.
Raha ny marina, ny angon-drakitra dia manamafy fa tsy te handoa votoaty ny olona.
Ny 75% amin'ny Gen Z sy ny Millennials dia efa nilaza fa aza mandoa votoaty nomerika—Avy amin'ny loharano maimaim-poana no ahazoan'izy ireo izany na tsia. Raha mpampanonta manana rindrina karama ianao dia tokony ho vaovao mampatahotra izany.
Fanadihadiana momba ny mpanjifa 2021 Publishing Digital
Raha ny marina, misy afaka milaza fa sakana ara-bakiteny amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izay tiantsika rehetra eto amin'ity firenena ity ny valin-karama. Amin'ny fanerena ny mpanjifa handoa votoaty, dia mandrara ireo izay tsy afaka na tsy mandoa tsy hahazo vaovao sy vaovao. Ary misy fiantraikany ratsy amin'ny rojo sandan'ny haino aman-jery manontolo izany — mpamoaka lahatsoratra, mpanao gazety, mpanao dokambarotra ary ny vahoaka.
Ahoana raha, amin'ny fivoaran'ny haino aman-jery nomerika, dia tsy voatery namorona zava-baovao isika, toy ny paywalls? Ahoana raha nanana izany foana ny televiziona eto an-toerana? Manaova doka vitsivitsy hanohanana ny famoronana sy fizarana votoaty.
Mety hieritreritra ianao fa toa tsotra loatra izany. Tsy azonao atao ny manohana famoahana nomerika amin'ny sora-baventy na doka teratany an-tserasera. Manimba ny fandaniana doka be dia be izany fikarohana izany, tsy ampy ho an'ny mpamoaka tsy miankina.
Inona àry no safidy tsara kokoa? Fantsona fifaneraserana vola ianao fanaraha-maso, toy ny mailaka, fampandrenesana fanosehana ary endrika hafa amin'ny hafatra mivantana. Amin'ny alàlan'ny fanolorana mailaka tsy misy karama sy famandrihana famandrihana, ary fanaovana vola ho an'ireo manana dokambarotra marika ao anatiny, ny mpamoaka lahatsoratra dia afaka mitazona ny mpihaino azy ary mitondra fidiram-bola vaovao ihany koa.
Ny vaovao tsara dia ny angon-drakitra dia mampiseho fa misokatra amin'ity karazana vola ity ny mpanjifa.
Saika ny 3 amin'ny 4 no milaza fa aleony mijery doka sy mahazo maimaim-poana ny atiny. Ary ho an'ireo mpanonta izay miahiahy fa ho tafintohina amin'ny dokam-barotra amin'ny mailaka na fanosehana ny mpanjifany, ny angon-drakitra dia mampiseho ny mifanohitra amin'izany: saika ny 2/3 no milaza fa tsy manelingelina mihitsy izy ireo na tsy mahatsikaritra akory ny doka.
Ny tsara kokoa aza, ny ankamaroan'ny mpanjifa nomerika dia milaza fa mifandray amin'ny doka amin'ny tranokalan'ny mpamoaka izy ireo. Ny 65% ​​amin'ny Gen Z sy 75% amin'ny Millennials dia milaza fa manindry ny doka amin'ny mailaka mailaka izy ireo raha matoky ny mpandefa, ary ny 53% amin'ny Gen Z sy 60% amin'ny Millennials dia misokatra amin'ny doka amin'ny fampandrenesana fanosehana - raha mbola natao manokana izy ireo.
Ho an'ny mpamoaka boky mitady hanitatra ny volany sy hampitombo ny fidiram-bolan'izy ireo, ny fananganana fifandraisana 1: 1 sy ny fandefasana votoaty manokana amin'ny fantsona feheziny dia fampiasam-bola tsara kokoa — ary mandaitra kokoa — noho ny rindrina karama.
Te-hahazo ny atiny ny mpanjifa. Ary vonona ny handoa ny vidiny amin'ny endrika fijerena dokambarotra izy ireo mba hahazoana izany maimaim-poana. Amin'ny fampiharana ny paikadin'ny famatsiam-bola matanjaka amin'ny fampiasana fitaovana toy ny mailaka mailaka sy ny fampandrenesana fanosehana, azonao atao ny manome azy ireo izay tadiaviny tsy misy sakana tsy ilaina amin'ny lalana.
Ampidino ny fanadihadiana momba ny mpanjifa amin'ny famoahana nomerika 2021
Tags: 2021dokam-barotrafanangonan-tsoniafanontana nomerikafanadihadiana momba ny mpanjifa fanontana nomerikamailaka amin'ny mailakataranaka zmillennialsmonetizationpaikady momba ny volamonetizevola votoatyPublishingfanindriana fampandrenesana